Dargaggeessi haadha warraa isaatiin reebamaa jiraataa ture dhuma irratti haqa argate - BBC News Afaan Oromoo
Dargaggeessi haadha warraa isaatiin reebamaa jiraataa ture dhuma irratti haqa argate
19 Guraandhala 2019
Madda suuraa, BBC Three/Century Films
Aleeks Sikiil dargaggeessa umuriin waggaa 20 yoo ta'u lammiin Ingliziiti. Hiriyaansaa dubartii waggoota muraasaaf mana keessatti miidhaa irraan gahaa turteeti. Miidhaa irra gahaa tureess BBC'tti himeera.
Bishaan daffee narratti naqxe. Guyyaa sanas gonkumaa jireenya kiyya keessatti hindagadhu.
Jalqaba jabanaa shaayiitti bishaan dafsuun isaan booda jabanaatti baatte ittiin na dorsiisuu eegalte. Mana cisaa keessattis bishaanicha narratti gadhiifte.
Jordaanaa waliin waggoota sadiif waliin jiraanneera. Jidduu keenya jaalalli hinturre yoon jechuu baadheelleen garuu waanuma guddaa fi xiqqaan waldhabaa ture. Kan nama dinqus rakkoollee hundinu kan eegalan waan xiqqaa irraa ta'usaati.
Miseensi paarlaamaa Yugaandaa 'haadha warraa kee reebi' jedhe'
Waa'ee fistulaa dhiiraa maal beektu?
Fakkeenyaaf haalli murannaa rifeensa kiyyaa ykn shamiiziin uffadhee madda waldhabdii keenyaa ta'u mala.
Erga bishaan danfaa narratti naqxeen boodas dhukkubbiinsaa dandeettii kiyyaan ol natti ta'ee ture. Bo'aas akkan bishaan qabbanaa keessa kaa'u akka naaf ayyamtuu kadhadheen. Isheenis naaf hayyamte.
Tasgabbiin natti dhagahamees kan jechaan ibsamuun ol ture.
Isheenis akka bishaan danfaa narratti naqxe yon namootatti himee addabbiin akka natti caalu na sodaachisuun na akkeekachiifte. Anis nan callise.
Kirkireen ishee sodaadha.
Bara jaalala nagaa keenya
Aniifi Jordaanaan kan wal barre osoo kaampaasii jiruu ture. Wayita wal baruttis lamaan keenyu ijoollee waggaa 16 turre.
Isheenis barattuu cimtu turte. Yunivarsitiis galu dandeesse jirti. Ani garuu barataa dadhabaan ture.
Haallichi cimaa kan dhufe booda keessa ture.
Waliin jiraachu eegalaan suuta suutaan akkan hiriyyoota kiyyaan wal hinagarreef na akkeekachiisu eegalte. Akkan feesbuukii hinfayyadamnees na akkeekachiifte. Dura akka ishee hin mufachiifnee jecha tolee jedhaan ture. Booda keessas sammuu kiyya hunda to'aatte.
Tooftaan ishees wal jalaan hojjateef booda garba ishee na taasiifte. Guttummaatti to'annaa jala nagalchuunis miidhaa mana keessaa narratti raawwachu eegalte. Na beelessitii; na hiitees na reebdi turte.
Guyyaa baayyees nyaata na dhoowwati turte. Ofii kiyyaan bilcheesis nyaachu hindandeenye. Yoo nyaannee hiitee waan na reebduuf jechuu garaa duwwaa olee buluu eegale. Haala nama sodachisuunis kiiloon kiyya gadi bu'e.
Yoo fuuldura ishee dhaabacghuu eegaluutti ammo dhimmicha naanneesitee anumatti deebiifti. Caalaayyuu balleessaawwan ishee anatti deebiisuun baayyiiftee na miidhuu eegalte.
Fakkeenyaaf kophee kee kana hinjaaladhu ykn shaamizii kee sana hin kaawwatiin yoo naan jettu ishee gammachiisuuf jecha kan isheen jettu hundan raawwadha ture. Ajajji ishee ammo xumura hinqabu ture. Kaayyoon ishees ana garbicha ishee taasisuu ture.
Wayita ijoollee godhanne haalli ni geedarama abdii jedhun qaba ture. Dogongoru kiyya kanan hubadhee garuu booda keessa ture. Miiidhaa narraan geessu cimaa dhufnaan anarra ijoollee kiyyaaf yaadda'uun eegale.
Osoon dhiisee deemees ijoollee kiyya irran balaa akka qaqabsiiftu mirkana ta'aa dhufe. Isaan bodas jireenyi kiyya cinqiidhaan gutamaa dhufe. Haa ta'u malee jireenyi kiyyaa fi kan Jordaanaa makaraa fi waldhabdee qofaan guutame hinturre.
Yeroo gammachuus waliin dabarsiineera. Wayita sanattis walitti dhufeenyi keenya akka fooyyee'uuf dubbiseen ture. Booda ammo deebiiste na sodaachisuu eegalti.
Akkan adda hinbaaneef ammo soda caalaa jalala isheetu na tursiise ture.
Rakkinicha waljalaan baraan dhufe
Yeroo ta'ees lafaa kaatee 'dubartootaaf ergaa ergiita' jechuun na himatte. Ani garuu gonkumaa sana hinraawwannee ture. Garuu na soodaachisuun akkan dhiifan ishee gaafadhu na taasiifte. Isa gochuutu isheef gammachu kenna ture. Na jilbiinfachiisuu, na reebuu, na naasuiisuutuu madda gammachu isheeti.
Yeroo hunda yoo raftu qaruuraa biiraa ofi bira kaawwatti. Yoo itti ka'es qaruuraa sanaan sammuu koo dhoofti.Yoo rakkinni natti cimuus dandha'uu fi itti baruu eegale. Kun ammo caala ishee aarsaa ture.
Xaarmusii dhiistee madooshaadhaan dugdakoo na tumuu jalqabde. Billaa qabattees na doorsifti. Yeroo hedduudhaaf du'a qarqara ga'een deebiye. Bishaan danfeen gubanna sadarkaa sadaffaadha jedhamu anarraan geessiftee beekti.
Erga danfaan na gubuu isheetiin booda akka na ajjeesuu dandeessu mirkaneeffataan dhufe.
Maaliif poolisiitti hin iyyanne?
Yeroo kun hunduu ta'u poolisiitti hin iyyanne. Tokkoffaa, ijoolleekoo irraan balaa hamaa geessisuu dandeessi kan jedhuun, karaa biraan ammoo haaloo na baati jedheen dhiise.
Balaa ana irraan geessee yeroo hospitaala na geessitu mara akka ani balaa sana ofiikootiin ofirraan gahetti akkan dubbadhuuf na sodaachifti.
Holloonni keenya waamicha birmannaa dhaga'anii dhufanii ni beeku. Ta'us garuu akka poolisittii hin bilbilleef jedheen sobaan isaan doggoggorsa. Buunyaa/boksiidhaan na dhooftee yeroo fuullikkoo yeroo na daalachaa'utti meekaappii itti diddibdee balleessiti.
Yeroon ishee waliin ture keessatti sodaachisa ana irraan gahaa turteefi adaba nyaata na dhowwachuu ana irraan geessurraa kan ka'een walumaa galatti kiiloo 30 hir'iseen jira. Hospitaala na geessite. Achiin booda guyyoota 10 osoon sirriitti hin nyaadhu ta'ee akkan du'uu danda'u natti himan.
Akkamiin akkan Jordaanaa irraa obbaafadhe?
Bara2018 keessa waan hunduu furmaata argatan.
Lafarra na ciibsitee na tumaa turte. Poolisiin naaf qaqqabe.
Yeroo poolisiin mana keenya dhufetti kan dhufe haa dhufu jedheen waan isheen na goote hundan itti hime. Fuullikoos dhidhiita'ee daalachaa'ee/momoccoramee ture.
Yeroo sanatti osoo poolisiin anaaf hin qaqqabne ta'ee dhuma jireenyakoo ta'uu danda'a ture.
Poolisichi waan arge amanuu dadhabe.
Sana hunda kan ana irraan gahaa turte hinaaffiidhaan kakaatee akka ture naaf gale. Ani maatiikoo waliin dhiyoon ture. Hiriyyootakoo waliinis yeroo gaariii qaban ture. Hunda isaanii irraa suuta suutaan adda na baafte. Kan dhuunfaa ishee na godhatte.
Yeroo tokko "Fedhiinkoo jireenyakee gaannam/si'ol gochuudha" naan jettee turte.
Dhiironni baayyeen yeroo mana keessatti miidhaan isaanirraan gahu dubbachuudhaaf ija hin jabaatan. ISaan qaanessa. Anis akkasuman ture.
Guyyaa guyyaadhaan 'ati dadhabaannan, ati duudaadha, ati dabeessa/sodaataadha, ati kachachalaadha' jechuun ana arrabsiti.
Jordaanaan waan ana irraan geessisaa turte guyyaa tokkoofillee gaabbitee hin beektu. Kan baayyee ishee aarse waan isheen ana irraan geesse poolisiitti himnaan isheen to'atamuu isheeti.
Mana murtiittis yakkamtuu akka taate amanteetti. Sanas kan goote murteen akka isheef salphatuuf jecha.
Dubartoonni mana keessatti miidhaa dhiira irraan geessisan maaliif akka godhan yeroon yaadu araada waan itti ta'u natti fakkaata. Hiriyyaa dhiiraa isaanii yeroo dararanitti gammachuu addaa argatu. Waan isaa akkuma sijaaraa, kokeeyinii araadadha.
Balleessaan guddaan miidhaan mana keessaa har'a irra boor dhaabbata jedhanii yaaduudha. dogoggorri guddaan isadha.
Jordaanaan waggaa 7 akka hidhamtu manni murtii yeroo itti murteessu imimmaan isaa haqameef.
30 Caamsaa 2018
Netaaniyaahuun mootummaa haaraadhaan aangoosaanii dhabuuf